Waa Jawaab Qoraalkii "Cabdiwaaxid Khaliif ma culimaa mise waa caamo?" ee Cusmaan Axmed Sheekh
Ilaahay baa mahadleh. Nabedgelyo iyo Naxariis Nabi Muxamed korkiisa ha ahaato.
Nolol Maalmeedkii Muqdisho April 6, 2001
Akhristayaal Soomaalidu waxay ku dacaayadeeyaan Reex Xamarka in mar wiilal reer Xamar ahi aabbahood waydiiyeen inta naas ee geelu leeyahay. Aabbihii wuxuu wiilashiisa u sheegay inuusan kasayn laakiin uu isna adoogiis (iyaga awoowgood) waydiin doono. Aabbihii iyo wiilashiisii waa israaceen si odayga waynaa loo waydiiyo. Odaygii markii su’aashii loo sheegay buu ooyey oo yiri haddaan dhiman lahaa yaa idin sheegi lahaa? Wuxuu yiri geelu hal naas buu qabaa! Wuxuu arki jiray awr siyaaro loo qalo. Haddii reer Xamar ku haray Soomaaliya oo la waydiiyo naasaha geela waxaa dhici karta inay dhahaan waa inta dhuumood oo qoriga shilkuhu (afar dhuumoodku) leeyahay maxaa yeelay waxay la kulmeen qaxooti iyo dhac iyadoo qorigaas aan sheegnay iyo kuwo kale la isticmaalay.
Walaalkeen Cusmaan Axmed Sheekh markii loola yimid su’aashii ahayd C/Waaxid ma culimaa mise waa caamo, isagoo wax ku qora Somalitalk darteed wuxuu yiri ma aqaan ninkaas laakiin aragtidayda wuxuu iila muuqda culumo caamada ka ag-dhow una janjeerta dhanka caamada.
Marka bal aan qodobbadaan is waydiino:
1- C/Waaxid ma culimaa mise waa caamo?
2- Caalimka iyo caamigu ma isku khaldami karaan?
3- Isku-lammaanin goobo cibaado iyo community iyo sidoo kale camal fiican iyo camal xun.
4- Maxaan Diinta u soo daliishadaa markaan arrimaha Soomaliya ama Puntland ka hadlayo?
5- Fidno ka shaqayn. Fitnadu ma dhimashadaa?
6- Aflagaado aan Puntland u geestay.
7- Wuxuu C/hi ku sheegay inuu yahay kan loogu qaato qab-qablayaasha.
8- Dambi la galo kee ugu wayn?
1- Cilmi Diin hadday noqoto, C/Waaxid waa caamo. Laakiin anigu cadowgayga waan aqaan.
2-Qoraagaa waxaad mooddaa inuusan aqoon erayga caalim ama culumo maxaa yeelay markuu iga hadlayey wuxuu yiri waxaan ula muuqdaa culumo caamada ka ag-dhow! Sheekh baa wuxuu xaddiis ka warshay sheekh kale oo uusan arag. Xaddiiskaas ayaa Imaam la gaarsiiyey. Imaamkii wuxuu yiri labada sheekh waxaa u dhaxaysa dhul bah-gooyo ah oo haddii awr loo rarto ay oon u dhiman lahaayeen iyagoon gaarin meeshay rabeen. Wuxuu ka wadaa labada sheekh is ma soo gaarin oo waxaa udhaxaysa sanado aysan isku soo gaari karin, xaddiis saas loo weriyeyna saxiix ma noqdo. Caalimka iyo caamiga waxay isu jiraan inta xidigaha iyo dhulku isu jiro haddaan garanayo masaafo kale oo ka dheer waan ku mataali lahaa. Ma filayo inuu walaalkaas qiimo-dilayo culumada laakiin tabartaa intaas dhigtay. Fiiri markaan ka hadlayo dadkii soo cibaadaystay oo uu xusay. Marka haddayba isaga kaa khaldantahay culumo iyo caamo waxaan filayaa in la fahmi karo inay isaga kaa khaldameen dadkii aan haystay iyo dadweynaha Puntland.
3-Waxay ku fiicnayd inaadan soo hadal qaadin Masaajid shaafici iyo salaada maxaa yeelay inaad dad soo tukaday oo Ilaahay soo caabuday ay dhexgalaan waxaysan aqoon u lahayn iyo idinkoo isu jiibiyey wax aydaan aqoon. Ma ahayn in aad sidii reer Kahaf aad dhex gashaan arrimo aydaan garanayn. Xasuuso xaddiiskii Abuu Daa’uud wariyey ee sanadkiisa dacfigu ku jiray markii ninkii dakharku ku dhacay ee isku junubay uu waydiiyey asxaabtiisii in ay uhayaan daliil uu uga badbaadi karo qubayska iyo dhaqida dakharkaas waxayse usheegeen inuu ku khasban yahay inuu qubaysato. Xaddiisku wuxuu leeyahay Nabigu (SCW) wuxuu yiri Afsoomaali ahaan waa dileen Allaha dagaalee bal may waydiiyaan haddaysan garanayn, daawada waxaadan aqoon waa su’aasha. Marka raggii wax ku waydiiyeyna goysay adna uga dartay bal sidii odaygii yiri geelu hal naas buu leeyahay baad adigoon qajilayn jawaab waafi ah siisay. Waad asiibtay markaad sheegtay inaan caamo ahay, haddaad Ijtihaad gaartay labo ajar ayaad heli lahayd laakiin waxaa ishkaal ku jiraa sida culumada iyo caamada iskaga kaa dhexgaleen. Teeda kale mujtahidku hadduu C/Waaxid la xiriiri karo oo arrinta waydiin karo looma baahna inuu wuxuu rabo iska sheego.
4-Diintu miyeysan muslimiinta qaban? Waxaan jeclahay in aan soo daliishado Aayad ama Xaddiis haddii micnaha aan rabo ka helayo. Diintu soow Adduunyadeena iyo Aakhiradeena kama hadlayso. Haddii markaan ka hadlayo dhibta ay qab-qablayaashu ku hayaan Diinteena, dadkeena iyo dalkeena aanan usoo daliishan waxaan Diinta ka aqaan, maxaan soo daliishadaa? Ma Zenawi sida uu Soomaaliya u arko ayaan soo qaataa? Ma fiiloosoofiyiinta reer Galbeedku waxay arkaan baan idiin soo bandhigaa? Awal baa dadka muslimiinta xukuma la dhacsanaayeen in Diinta iyo dowlada lakala saaro adna ma waxaad rabtaa in dantayda iyo Diinta aan kala saaro?
Teeda kale waxaad soo daliishatay in niman Diinta aad u yaqaanay ay kala taageereen Maxamed Siyaad iyo Kulmis iyagoo Diinta ku raadgadanaya. Marka haddii qof Diin yaqaan uu khaladkaas gali karo maxaad u leedahay qof aadan aqoon waa caamo ama waa sidaas? Khalad kasta oo Diinta laga galo ma tusayo aqoon la’aan ee waxaa dhici karta dano kale oo qofka ku khasbi kara arrintaas.
5- Guubaabo kasta fidno ma ahan. Qofka oo xaqiisa u dhintana fidno maahan. Dib ufiiri Suurat Al-Ukhduud iyo Xaddiiskii saxiixa ahaa ee wiilka yari rabay in uu u dhinto in dadku diinta fahmaan. Sidoo kale shacabkii oo dhan baa loo dilay diintii ay fahmeen. Marka wiilkaas arrintaas sababta u ahaa ma dad buu halaagay? Mise wuu badbaadiyey?
Haddii aysan Cadde Muuse iyo Cabdi Yaasiin qaabkaas ula hadal C/hi, maanta nabadaad sheegayso lama arkeen. Haddaadan fahmi karin waxa loo socdo waxay ku fiicantahay inaad hubsato. Ma anoo hadda shacabka Puntland kicinaya ayaad aragtay? Sheekadaas waa dhamaatay laakiin shacabka waxaan leeyahay ha keensadeen qof wax-garad ah oo ay dadka la hortagaan. Hadday ku dhibtay taladaydii waxaan rajaynayaa haddii Ilaah idmo inaad arki doontid C/hi oo “Puntland” u huleelay isagoo hungo ah ilayn ma jirto cid uu ka gadmayee.
6- Waxaan shakki ku jirin in uusan C/hi kaligiis khaladka lahayn ee ay markasta madaxda iyo dadkeedu isleeyahay. Sida loo dhaho “kamaa tadiinu tudaan”. Ama neef walba shililkii isku dhigo ayaa lagu qalaa. Waad ogtahay C/hi inuusan cinqilaab ku qabsan Punltand sanadkii 1998. Yaa doortay? Miyeysan dooran guurti ay soo xusheen? Dhibtuu gaysto miyeysan dadkaasi wax ku lahayn? Saasooy tahay maqaalkii aad ka gubatay waxaan si toos ah oo aan leex-leex lahayn kaga hadlay C/hi, dadka doomaha leh iyo taliyaha qaybta booliiska gobolka Bari. Ma dhowr qof baa shacab noqday? Teeda kale guubaabada iyo eedaynta kala baro.
7- Waxaad sheegtay in C/hi yahay kan loogu qaato qab-qablayaasha. Mahadsanid walaal haddaad xustay khaladka C/hi leeyahay oo ahaa inuu dacwadda Islaamka ka soo horjeedo. Waxaan ku sii faahfaahin qodobka ah dambi lagalo kee ugu wayn. Waxaad xustay in uusan C/hi dadkiisa maahee cid kale dhib ku hayn. Yaa la qaataa qof walaalkiis dilay iyo mid ina adeerkiis fog dilay? Miyaan gabyaagii oran qayrkiis ka hare waa ninkii qalay walaalkiise. Ma waxaad leedahay nin hooyadiis qorrax u jiiday baa aayadiis hoos hariya? C/hi Soomaali wuu dhibay oo isagaa bilaabay Amxaaro la hoosgalo laakiin ma helin dad kale oo uu xukumo oo aan tolkiis ka ahayn, iyagiina inuu karbaashay adaa qiray. Diintiina inuu la dagaalay sheegtay. Marka suuragal ma tahay nin Diintii iyo ehelkiis dhibay inuu Soomaali wanaajinayo?
8- Dambi la galo kee u wayn? Diinteenu waxay sheegtaa Shirkiga iyo gaalnimada. Nin culumo ah wuxuu yiri haddii Diinta loo soo dhigto ku difaac maalkaaga. Haddii dhibtu maalkaaga soo dhaafto ku difaac naftaada oo Diinta yaan loo tagin adoo nool. Saasaay culumadu qabaan ee aan u fiirsano waxa carruurtu tiraahdo. Markaan carruurta ahayn waxaan dhihi jirnay Diintuu caayey wuu gaaloobay. Sidoo kalana dugsi diidoow dibad wareegoow adaa dulloobaye sida dameeraha hana duufsan. “Maxaad xilkaas dhallaanku gartay u garanwayday walaal”? Carruurnimadaydii waxaan aqaanay in qofka diinta caayaa uu dadka ugu daranyahay. Adigu kornaylka oo aad qirtay inuu Diintii la dagaalay baad tiri isagaa u mudan. Waxaan ugu tagi doonaa qodabkeeda haddii Ilaah idmo. Hal-abuurrada iyo fannaanniinta Soomaaliyeed maxay dhaheen? Bal arka heestan. Ugama jeedo inaan idiin saaro hees lagu qayilo ama lagu raaxaysto laakiin waa xikmad. Wuxuu yiri:
Sidaan ahay nin gaal oo Xaramaynkii galayoo
Gubay maalin Ciideed lagu soo gurmaday baad
Gabi dheer isaartood igu gooni baartee
Guur ha iga filanine gurigayga ii dhaaf.
Allaahu akbar, Ilaahoow u dambi dhaaf qofkii tiriyey iyo kii qaaday labadaba. Hal-abuurruhu wuxuu cabbiray in gaalnimadu tahay waxa u wayn. Wuxuu kasii dhigay gaalkii oo fal gubniin iyo dil leh ku sameeyey bogcaddii dhulka ugu fiicnayd iyo maalintii ugu fiicnayd, dabcan bishii mar hadduu maalintii ciidda xussay. Waxaan labo iswaydiinayn in qab-qablihii diinta iyo dadkeeda ugu cay badani uu yahay kan ugu liita. Inkastoon caamo ahay waxaan faqiih noqdaa marka aan dad iga caamaysan la hadlayo. Marka walaalkeen waxaan waydiinayaa waa kee ninka C/hi ka diin neceb? Ninka intuu cajalad duubay ku sheegay magaaladii ay ehelkiisu degenaayeen meel ay iskuulada ka jira iyo ganacsiga yaal Al-Qaacida leedahay. Waxaan marar badan xussaa in Cismaan Caato oo aan dhibkiisa wada naqaan uu difaacayey Xamar isagoo leh haddii argagixiso joogto Xamar anaa la dagaali lahaa. Markaas waa loo baxsaday.
Marka C/hi ma isagoo intaas falay buu rabaa inuu dad muslimiin ah oo Soomaali ah madaxweyne u noqdo? Sidii Hal-abuurku u lahaa guur ha iga filanine gurigayga ii dhaaf waxaan C/hi ku leenahay doorasho ha iga filanine Diinteena/geyigeena noo dhaaf.
9- SSDF ma indhahay noo furtay? Maalin baa wiil uu dhalay Yasiid Binu Mucaawiye usoo galay C/Malik Binu Marwaan oo Amiirul Muuminiin markaas ahaa. Mid Ina C/Malik ah ayaa wiilkaas Mucaawiye awoowga u ahaa is murmeen. Marka Ina C/Malik baa yiri “laa yucaddu ciiran walaa nafiiran” oo ah maahmaah ay Qurayshi soo saartay markii ay Nabiga (SCW) la dagaalamayeen khaasatan dhacdadii Badr. Qurayshi ninkii aan raacin Cutbah iyo Abaa Jahal oo ciidanka watay ama aan ku jirin Safarkii Abuu Sufyaan waxay dhahaan waxba yahay oo dagaalkiina kuma jirin, awrtii iyo safarkiina kuma jirin bay ka wadaan. Waa meesha Soomaalidu ka tiraahdo B iyo T midna ma ahan. Wiilkii mucaawiye awoowga u ahaa wuxuu yiri qisadu waxay ku baxday labadaydii awoowe ilayn Abuu Sufyaan wuxuu ahaa Mucaawiye aabbihiis, Cutbana wuxuu ahaa aabbaha Hindi oo ahayd Mucaawiye hooyadiis ilayn iyagaa labada qolo kala hogaaminayey laakiin haddaad dhihi lahayd goosan ari ah iyo oday la cayrshay/tacziiray oo meel cidlo ah ari ku haysta waad saxsanaan lahayd ilayn Xakam oo ahaa C/Malik Binu Marwaan awoowgiis ayaa mar loo cayrshay inuu halkaas aado iyadoo lagu ciqaabayo. Tusaale ahaan qofkii Faadumo iyo Xasan iyo Xuseen (RC) xussa waa qof Cali Binu Abii Dhaalib xussay ilayn maskaxdaada wuu ku soo dhacayaa. Marka maahmaahda uu Ina C/Malik soo qaatay waxay sharaf u kordhinaysaa ninkii uu usoo qaatay ilayn labadiisii awoow ayaa ciidanka kala watay.
C/Malik oo amiirul Muuminiin ahaa oo meesha fadhiyey baa xanaaqay markii wiilkiisa la aamusiyey. C/Malik wuxuu akhriyey aayadii ahayd “Inal Muluuka idaa dakhaluu qaryatan afsaduuhaa ilaa dhamaadka aayadda”. C/Malik wuxuu ka wadaa haddee wiilku waa ina Amiire iska jir. Wiilkuu Mucaawiye awoowga u ahaa isna wuxuu akhriyey aayad kale oo ku jirta Suurat Al-israa oo ahayd “Wa idaa aradnaa annuhlika qaryatan amarnaa mutrafiihaa ilaa dhamaadka aayadda” oo ah Ilaah leeyahay haddaan rabno inaan qaryo halaagno waxaan ka yeelnaa kuwooda loo nicmeeyey (madaxda, IWM) markaasay fasahaadiyaan markaas ayaa cadaabkii ku rumoobaa. Halkaas ayaa C/Malik iyo wiilkiisii lagu aamusiyey. Hadda waxaan leeyahay qofkii C/hi ama qoraa kale oo aan radiyey ka xanaaqoow adna waan kuu hayaa jawaabtaada haddii Ilaah idmo.
Waxaan uga danleeyahay ninka raba inuu SSDF ii sharxo miyuusan ogayn in ninka sheekada bilaabay waa cinqilaabkiiye uu yahay Cirro oo ina adeerkay ah sidoo kale meesha ay SSDF joogtay sida Wardheer,Galaadi, Dhudub iyo Bookhna waa degaankaygii. Waxay ku fiicnayd inaad xustid meelo kale. Waxaan xasuustaa in ani iyo wiil aan ilmo adeer ahayn oo Gaalkacyo uga soo tagnay inaan u fakado Kulmis anoon 15 jir gaarin, in mar aan kubbad ku maqnaa uu ina adeerkay helay cid dhaan wadata oo fakaday. Laakiin hadda Ilaah baan ku mahadiyaa in uusan halkaa igayn. Waa ciyaartii iigu fiicnayd ee aan ciyaaray mar hadday C/hi iyo ani iskaaya dhaafisay. Ehelkayga (xaga abtirsiga) 99% waxay aadeen Kulmis ama awalba ay degenaayeen. Marka hadday cidi SSDF sharaf ku helayso waxaan noqon lahaa ninka ugu horreeya ee ka hela. Marka ma waxaad isleedahay qabiil buu ku haystaa SSDF?
Kacab Binu Maalik (RC) intii aan Towbada laga aqbalin waxaa waraaq usoo qoray boqor oo yiri isoo haleel anagaa sharaf kuu haynee oo ka soo tag Muxamed (SCW) iyo liidida lagu liiday. Sidoo Kale Mucaawiye (RC) wuu diiday inay Ruum uga gargaarto Cali Binu Abii Dhaalib (RC). Marka ma saaxabadaas baa saxsanaa mise C/hi iyo SSDF?
Marka waxaa halkaas ka muuqata in aadan fitnaba aqoon haddaad tiri SSDF indhahay noo furtay si loo rido nin diktatoor ahaa! Hadalkii C/hi baad ku raacday ee ahaa anaa dowladii Soomaaliyeed riday. Marka waxaba uga dheeraan mayno arrintaas.
11- Qoraaladaydu waxay faa’iido u yihiin dadkaas aad sheegtay inay yimaadaan community aad magacowday maxaa yeelay intay qaaraan C/hi loo aruurinayo ku mushquuli lahaayeen ha iska mashquuleen hadal hayntayda laakiin ma filayn inay markay soo cibaadaystaan masaajidka hortiisa ay arrinta ku galaan. Marka arrimo waxaa jira aan u baahanayn in aad ku waydaan salaadiina sida da’dayda, inaan caamo ahay iyo in kale, kaliya waxaa idin ku filan inaad e-mail ii soo dirtaan si aan idin ka shaafiyo. Xittaa haddii sida aad xusteen aad malihiina ku runsheegtaan waad ku dambaabaysaan. Anigu kolay waan idin cafiyey sidoo kalana waxaan ka dalbanayaa dadkaan wax u dhimayna inay i cafiyaan. Marka diinta iyo dadka qofkii faraha la soo gala uga harimaayo laakiin aniga waxaan ahay qof Soomaalidaas ka mid ah.
Waxaan aaminsanay inaad tahay dadka C/hi jecel laakiin aan isu qabin inaad jeceshahay oo u baahan in loo sheego oo la yiraadho C/hi baad jeceshahee la soco maxaa yeelay waxaad sheegtay inuu Dacwada Islaamka necebyahay oo la dagaalamayo waxaad kaloo sheegtay in uu yahay kan loogu qaato uguna mudan inuu wax noqdo qab-qablayaasha Kenya jooga!
Faafin: SomaliTalk.com | Sept 9, 2003